Maxay iga caawin kartaa inaan kor u qaado liiska alaabta ee Amazon?
Dhaqdhaqaaqa waxqabadka mashruuca ganacsiga (isaga oo eegaya dabeecadda la xidhiidha warshadaha) ayaa si weyn loogu hagaajin karaa qalabyada caqli-gal ah ama ogaansho-u-qaas ah oo loogu talagalay in lagu caawiyo taas. Hawlaha ganacsi ee maraakiibta ee Amazon ma ahan in laga saaro sharcigan aan-maskaxda lahayn. Iyo marka ay timaado in la siiyo darajo si aad u sarreeya sheygaaga Amazon, qodobka muhiimka ah ee halkan waxaa ku habboon in la isku dhejiyo asaaska aasaasiga ah - taas oo loo baahan yahay in lagu ilaaliyo kharashka sida ugu hooseeya ee ugu macquulsan, ugu yaraan muddo yar. Sidaa daraadeed, marka ganacsigaagu noqdo mid faa'iido leh, waa wakhti aad sare u kicisay wax soo saarkooda iyo dakhliga soo saaraya kartida wax badan - residential plumbing services southern california. Sidaas, waxaan hoosta ku socdaa inaan ku tuso qaar ka mid ah qalabkeyga ugu fiican iyo software kaas oo kaa caawin kara inaad sii wanaajiso liiska alaabta ee Amazon oo aad uga faa'iideysato si joogto ah u iibinta iibka waqti badan. Halkan ayay yihiin.
Waa in laga faa'iidaysto adeega iyo alaabooyinka loogu tala galay alaabada Amazon
on Amazon, ugu yaraan in la daabaco calaamadahaaga shakhsi ahaan shay kasta oo cusub oo lagu daray sheygaaga. Shaxda Shaxda sidoo kale waa mid aad u fiican in lagu ilaaliyo faa iido kasta oo aad u dirto Amazon. Maxaa badanaa - adeeggani wuxuu dhab ahaantii yahay nidaam xisaabeed iyo xisaabin buuxda. Laakiin taasi macnaheedu maaha inaad u isticmaasho canshuur. Aniga ahaan, adeeggani wuxuu ahaa mid aad u fiican si aan u kormeerno waxqabadyada dakhliga ee "lacagta" ee soo kordhay si loo sameeyo isbedelada lagama maarmaanka ah mar kasta oo aan doonayo.
Ebates waxa uu yimaadaa fidiye dheeraad ah si aad u hesho faa'idada ugu saraysa ee isticmaalka adeegga lacagta caddaanka ah. Xaqiiqdii, waxaad horey u bixisey lacag kugu filan oo aad ku iibsan karto liiska online. Sidaa darteed maxaad u diideysaa inaad lacag caddaan ah kaaga bixiso ka dib? And Ebates waa mid aad u adeegsanaya isticmaalka, oo bixiya badhanka khariidad gaar ah (haddii kale, bar) si aad u hesho xasuusin degdeg ah oo loogu talagalay iibka kasta oo u baahan in la dhaqaajiyo muuqaal dhab ah. Iyadoo tixgelineysa in kordhinta la heli karo marka loo eego helitaanka furan, iibiyahayga kale ee ku faanaya wax qiyaastii 4 kun oo bucks dhawaan dhowaan lagu keydiyay adeegga lacag celinta bishii wuxuu u muuqdaa mid aad u adag, sax ah?
Waxay kale oo ku darsamaysa shabakad gacan ka gaysanaysa in badan oo iibiyaal ah oo leh darajada alaabta ee Amazon. Platinum Cleeterum waa farsamo fudud oo si fiican u shaqeynaya oo soo jiidi kara shaqo adag oo isbarbardhigaya alaabooyinka si nidaamsan oo sahlan oo sahlan. Qalabkani wuxuu ku siinayaa badhado gaar ah marmar muuqata bogagga shabakadda qaybta libaaxyada ee dukaamada waaweyn. Si fudud u dhig, marka aad aragto badeecada iibka, tusaale ahaan Walmart, Cleer Platinum waxay kuu soo jeedin kartaa dalab la mid ah ama si buuxda la mid ah oo ku qoran meelo kale oo ku yaal Webka, oo ay ku jiraan Amazon laftiisa, iyo sidoo kale eBay. Maxaa dheeraad ah - barta shabakadda ku dari kartaa waxay ku siin kartaa guno kale, midigta bogga raadinta ee Amazon. Hubi inta ugu badan ee iibinta iyo darajooyinka qaybaha - mar walba awood u yeelo inaad kedis ku sameyso baaritaan degdeg ah iyo haddii aad buuxinayso shuruudaha, oo aad ogtahay natiijada raadinta inay ahaato mid ugu wanaagsan in la bilaabo qodidda.